Isabell Kiefhaber dia maniry fatratra ny seho bitika kely amin'ny peratra | Famoronana an-tserasera
Eo am-pelatanantsika dia azontsika atao foana ny manao peratra izay maneho ny firaisana eo amin'ny olona roa na pacte miafina efa lasa izay ary izay mitafy azy sy ilay nanome azy ihany no mahalala. Tantara izay azo aseho amin'ny tolo-kevitra natolotr'i Isabell Kiefhaber, mpanakanto firavaka izay gaga antsika amin'ireo peratra tena izy sy tena hafa mihitsy.
Ao amin'ireo peratra noforonin'i Kiefhaber no hitantsika seho kely milaza tantara kely na hetsika tsotra iray izay itiavan'ny olona azy ireo. Peratra izay tsy mitady rendrarendrika, fa aleo fantaro ilay olona miaraka amin'ilay sehatra kely sy kely.
Ny peratra dia noforonin'ny mpanakanto alemana Isabell Kiefhaber ary azo vidiana amin'ny Etsy. Noforonina tamin'ny resina izy ireo ary ny tsirairay amin'izy ireo dia manolotra toerana hafa sy kely izay ilazana zavatra iray. Manomboka amin'ny filalaovan'ny mpivady tenisy ka hatramin'ny lehilahy manao akanjo lava. Misy aza ny iray izay ifamalian'ny mpivady iray amin'ny dabilio.
Na dia tianao aza dia manana rojo ianao izay isehoan'ny lokony ho an'ny andiana mpiandry ondry any ambanivohitra. Ny hevitra dia miovaova ary, araka ny nolazaiko, dia tsy mitady rendrarendra izy ireo, fa kosa ho antsipiriany hafa amin'ny peratra hafa izay tsy misy fikarohana intsony noho io.
Isabell dia nilaza fa a liana amin'ny famolavolana sy ny asa feno. Ny firavaka sy ny asa-kanto dia ny filàny roa hafa izay afangaroany amin'ny fampifangaroana tanteraka. Raha misy antony tsy hitanao ny volavola tadiavinao dia manaiky baiko i Isabell ka mijanona ny Etsy anao o Malagasy hifandray aminy ary gaga olona iray tianao amin'ny fanomezana tena izy.
Asa tena mitovy amin'ny rojo nataon'ity mpanakanto ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Seho kely indrindra amin'ireo firavaka ireo noforonin'i Isabell Kiefhaber